Indlu encinci yeeFairies emahlathini. Iiholide kunye nokuphumla - I-Airbnb
Indlu encinci yeeFairies emahlathini. Iiholide kunye nokuphumla
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguGiovanna
Igumbi lokuhlala elinendawo yokutyela elinegumbi lokuhlala elinendawo yokutyela, igumbi lokuhlala elinesibini, ibhedi yesofa yaseFransi, igumbi lokuhlambela elineshawa, ithala elijonge emahlathini. Le ndlu ibekwe kwikhondomu kwindawo ezolileyo kakhulu 10 imizuzu ngeenyawo okanye imizuzu emi-2 ngemoto ukusuka P.za dell'Abetone. Ifenitshala yowona mgangatho uphezulu. Izalathiso: ukusuka eVia Uccelliera, Via Bagatti 45.
Amaxabiso enzelwe abantu aba-2 ngobusuku obunokubakho kutshintsho olubonakalayo kwikhalenda
Indawo yokuhlala ibekwe kwikhondomu entywiliselwe kumthi othule kakhulu, imizuzu eyi-10 ngeenyawo kunye nemizuzu emi-2 ngemoto ukusuka kwisikwere esikhulu sase-Abetone apho unokufumana zonke iivenkile kunye nekhemesti. Yamkelekile kwaye ishushu indlu enamagumbi amabini, ixhotyiswe ngabo bonke ubutofotofo. Ungaphila kamnandi kubantu aba-4 kwaye kukho ububele kunye nezixhobo nakwizilwanyana zasekhaya ezincinci (max 2) okanye ubungakanani obuphakathi (max 1)
Ubumelwane buzolile kakhulu, kufuphi nomzila wokunqumla ilizwe, ingakumbi ehlotyeni, indawo yokuya kubantu abathanda ukuhambahamba kunye nabathandi bohambo lwendalo. Ngasecaleni kwendlela echazwe ngasentla unokuzihlaziya kwindawo yokuhlala encinci ebonelela ngepolenta ngamakhowa okanye iragù, iisoseji kunye neepayi zeblueberry zasekhaya ezithandekayo eziqhelekileyo kule ndawo. Ngokuhlwa, uthatha amanyathelo ama-2, ufika kwimizuzu embalwa kwisikwere esikhulu apho unokufumana zonke iindawo zokutyela ezilungileyo, ii-pizzerias okanye ii-pubs. Indawo yokudlala yabantwana kunye neminyhadala yasehlotyeni iya kukhapha iiholide zakho.
Itshekhi-in kubonisa yaye kuyimfuneko ukuseka ixesha ngqo ngezivumelwano yomnxeba kunye noNkosikazi Letizia ngenani Customs Arhente 335 411915 okanye kunye noNkosikazi Elena inombolo 339 3520468 okanye umnini indlu, Giovanna, kule nombolo 338 8170005.
Itshekhi-in kubonisa yaye kuyimfuneko ukuseka ixesha ngqo ngezivumelwano yomnxeba kunye noNkosikazi Letizia ngenani Customs Arhente 335 411915 okanye kunye noNkosikazi Elena inombo…